Suite yeWebhu yeNtlalo: Iqonga loLawulo lweMidiya yoLuntu eyakhelwe abapapashi beWordPress | Martech Zone
Ukuba inkampani yakho ipapasha kwaye ayisebenzisi imithombo yeendaba zentlalo ngokufanelekileyo ukukhuthaza umxholo, uphoswa ngokwenyani kukugcwala kwezithuthi. Kwaye ... ukufumana iziphumo ezingcono, isithuba ngasinye sinokusebenzisa ulwakhiwo ngokusekwe kwiqonga olisebenzisayo.
Okwangoku, zimbalwa iinketho zokupapasha okuzenzekelayo kwi WordPress indawo:
Uninzi lwamaqonga osasazo eendaba ezentlalo aneempawu apho unokushicilela khona kwi-RSS feed.
Ngokukhetha, ungasebenzisa ifayile ye- iqonga lokondla eshicilela ngokuzenzekelayo xa ifidi yakho ihlaziywa, nayo.
Inkampani yeWordPress 'ikwabonelela jetpack enokukhetha ukupapasha ukutyhala iiposti zakho kumajelo akho entlalontle.
Kwimeko nganye, ukongeza iiakhawunti zakho zemidiya yoluntu kwaye emva kokuba isondlo sakho sihlaziyiwe, umyalezo uhlanganisiwe kwaye upapashe ijelo elifanelekileyo. Basebenza kakuhle, kodwa kukho umda omkhulu kubo bonke.
Apho a isihloko seposi inokulungiselelwe ukukhangela, a Imidiya yoluntu unokufuna ukuheha ngakumbi kwaye usebenzise ii-hashtag ukuqhuba ingqalelo eyongezelelweyo. Ngenxa yoko, uninzi lwabapapashi abafuna ukusebenzisa ngokupheleleyo imithombo yeendaba zentlalo bathathe kwaye baphathe ngesandla uhlaziyo lwabo lweendaba zentlalo. Ngelixa kuthatha imizuzu embalwa eyongezelelweyo ukuhlela kunye nokupapasha kwiqonga ngalinye, iziphumo zinokuba ngcono kakhulu kunokuba ucofe ukutya kwakho.
Suite yeWebhu yeNtlalontle
UTina Todorovic kunye noDejan Markovic bakha iplagi yeWordPress edityaniswe neBuff. Kodwa njengoko beqala ukufumana izicelo ezingaphezulu nangaphezulu ezingenayo iBuffer, bagqibe kwelokuba bakhe iqonga labo- Suite yeWebhu yeNtlalontle. I-Suite yeWebhu yezeNtlalontle ibandakanya yonke into eyimfuneko yokulawulwa kweqonga losasazo ngokudityaniswa okukhulu kwi-WordPress. Ezinye zezi zinto zibandakanya:
Isakhono sokungadibanisi iiposti kuphela, kodwa amaphepha, iindidi, kunye neethegi ngokunjalo!
Izithuba zakho zipapashwa kwangoko kwiiakhawunti zentlalo nje ukuba zipapashwe kwiWordPress emva koko zisiwe ngasemva kudidi lwazo ukuba ziphinde zabelwe kwakhona emva kwexesha!
I-automation elula eguqula udidi okanye ithegi yesithuba kwii-hashtag kwizithuba zakho zemidiya yoluntu.
I-URL yoPhando lweGoogle ezenzekelayo ene-UTM eguquguqukayo ithegiwe ngokuzenzekelayo.
Endaweni yokupapasha kwangoko kumajelo asekuhlaleni, izithuba zibekwe emgceni kwelona xesha lifanelekileyo lokupapasha.
Izithuba ze-evergreen zinokuphinda zipapashwe.
Ikhalenda epheleleyo yokupapasha ikunika umbono ocacileyo wento kunye nohlaziyo ngalunye oluya kupapashwa.
Kukho inkxaso ebanzi kuwo onke amaqonga eendaba ezentlalo aneSocial Web Suite. Ungapapasha kumaphepha e-Facebook okanye kumaQela, kwi-Instagram okanye kwiiAkhawunti zeShishini ze-Instagram, kuTwitter, kwiiProfayile eziDibeneyo okanye kumaphepha. Kwaye, ukuba ungathanda ukuzisa iividiyo zakho ze-YouTube okanye enye i-RSS feed, ungayenza loo nto.
I-Suite yeWebhu yeNtlalo sesona sixhobo sinamandla sokucwangciswa kwezentlalo endakha ndasisebenzisa. Ngoku ndisebenzisa izixhobo ezininzi ukufezekisa okwenziwa yiSocial Web Suite, kwaye ndonwabile ukuba ne-Social Web Suite ithathe indawo yazo! I-Suite yeWebhu yeNtlalontle ngumdlalo-tshintsha iibhlog kunye namashishini amancinci kwaye iya kwenza ukucwangciswa kwezithuba kube lula kakhulu!
Kwiqonga lonke lolawulo lweendaba zosasazo olunje, amaxabiso ayafikeleleka ngenene. Ungaqala ngeakhawunti enye yomsebenzisi epapasha kwiiakhawunti zeendaba zentlalo ezi-5 kwaye ushenxise yonke indlela ukuya kwiakhawunti yeshishini evumela abasebenzisi aba-3 ukuya kuthi ga kuma-akhawunti angama-40 eendaba.
Qalisa ukuLingwa kweentsuku ezili-14 zeSayithi yeWebhu yeWebhu
Ukubhengezwa: Ndililungu le Suite yeWebhu yeNtlalontle.
tags: FacebookIqela le-FacebookIprofayile kaFacebookinstagramiprofayile yeshishini le-instagramLinkedInamaphepha axhunyiweiiprofayili ezihlanganisiweyorss kwimidiya yoluntuikhalenda yemidiya yoluntuUkuthunyelwa kwimidiya yoluntuukupapashwa kwimidiya yoluntuiqonga lokupapasha imidiya yoluntuUkucwangciswa kweendaba ezentlalowebhusayithi yoluntuTwitterWordPressiplagi yamagamaYouTube kwimidiya yoluntu
I-InfluencerActive: Fumana i-B2B Influencers ngokulula kwiPhulo lakho elilandelayo lokuThengisa